Paris zanaka vavin'i Michael Jackson dia manome voninahitra azy amin'ny sary tsy navoaka - teles relay
11 taona taty aoriana, ny fahaverezan'ny Michael Jackson dia manohy mamorona vakoka ara-javakanto goavana ary fahaverezam-po mahatsiravina ho an'ny fianakaviany. Maty tamin'ny faha-50 taonany tany Los Angeles, ary ny zanany vavy dia Paris, 11 taona tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny izy lehibe dia mbola nostalgia ho an'ny dadany.
Andian-dahatsoratra iray natokana ho an'ny zanakavavin'ny tara "Mpanjakan'ny Pop", Michael Jackson. Tsy navoaka izy dia navoaka tao amin'ny Facebook Watch ary mampiseho ny fitiavany ny rainy izy.
Amin'ity andian-dahatsoratra an-tsoratra ity, nahita ilay zazavavy kely Paris niresaka tamin'ny rainy. Nanontany azy izay tiany hatao taoriana izy: "Ny ataonao"hoy ny navaliny. "Inona no ataonao ?", hoy ny nanampy an’i Michael. "Mandihy sy mihira". Ity horonantsary fanadihadiana ity dia misy sary maromaro hafa mampiavaka an'i Michael Jackson sy ny zanany vavy Paris.
Ankehitriny, maodely, mpilalao sarimihetsika ary mpihira, Paris faratampony dia mitarika ny fiainan'ny mpanakanto araka ny voatondro ao amin'ity fanadihadiana ity mitondra ny lohateny "Unfiltered". Ao amin'ny kaontiny Instagram, ny vehivavy dia nanararaotra ny fanomezam-boninahitra ny rainy ihany koa.
Namoaka andian-tsary tany am-boalohany izay nalaina teo amin'ireo mpaka sary fianakaviana izy. Michael sy ny mpiray tsikombakomba aminy mihoatra noho ny taloha, Michael izay manao tarehy sy manao tsiky marevaka. Fenihana feno fihetseham-po.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://afriqueshowbiz.com/michael-jackson-sa-fille-paris-lui-rend-hommage-avec-des-photos-inedites/
Davido tsara amin'ny fanadinana Covid-19 dia mangataka vavaka